Thomas Quick oo gebi ahaanba dembiyadii laga tirtiray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Thomas Quick, oo hadda lagu magacaabo Sture Bergwall. Sawirle: Yvonne Åsell/Scanpix.
Thomas Quick oo gebi ahaanba dembiyadii laga tirtiray
La daabacay torsdag 1 augusti 2013 kl 12.30
Arbacadii shalay ayaa maxkamaddu go’aan ku gaartay Sture Bergwall gebi ahaanba laga tirtiro dembiyadii dilka ahaa oo horay loogu xukumay. Hase yeeshee, xeerilaaliyaha qaranka Anders Perklev ayaa shir-jaraa’id oo uu qabtay ku yiri:
– In qof lagu xukumo in uu geystey dilka siddeed qof, dabadeedna laga siidaayo dhammaan dembiyadaas waa wax aan horay u soo marin taariikhda garsoorka Iswiidhen. Waa wax loo arki karo guuldarro ku timid garsoorka dalka, ayuu xeerilaaliye Anders Perklev.
Dhanka kale waxaa dhaleeceyntaas iska fogeeyey xeerilaaliyihii dacwooyinkii Bergwall oo weli ku adkeysanaya in xukumadu u dhaceen hab sharciga waafaqsan Quick xukun sax ah lagu ridey:
- Waxaa hadda nala ku eedeynayaa in dhammaan dadkayagii xukumadaas ka soo qaybqaatay aan ahayn dad laab la kac wax ku xukumay. Waxaa halkaan ka sheegayaa in aanu qalad geli karno sida dadka kale ee sharciga, laakiin hadda aanaan wax qalad ah gelin. Haddii aan dib u jalleecana xukumadii aan soo ridney, waxaan caddeynayaa in ay xaq ahaayeen.
Dhanka kale qareenka Sture Brgwall oo lagu magacaabo Thomas Olsson ayaa ku tilmaamay habkii xukumadu u soo dhaceen fadeexadii ugu weyneyn ee soo marta garsoorka Iswiidhen.
- In dacwooyinkaan dib loo furo waxay soo socotey muddo afar sano ah, haddana waa la soo gebagebeeyey. Waxaanse oran karaa in haddii loo eego xeerarka adduunka, uu habkaan wax loo xukumay ka muuqdo astaamo aan horey loo arkin. Waana ayaandarro weyn in qof aan wax dembi gelin lagu xukumo in uu siddeed qof dilay.
Sture Bergwall oo horay loogu magacaabi jirey Thomas Quick ayaa sheegey in uu dareemay fudayn markii uu soo gaaray go’aankii lagu burburiyey xukunkii ugu dambeeyey oo hadda laga siidaayey:
- Hadda nefis aad u weyn ayaan dareemayaa. Waxaan soo maray dacwo waqti dheer qaadatay oo meelo badan lala soo maray. Haddase waxaa i soo gaaray war aad loogu farxo, ayuu yiri Sture Bergwall oo telefoon lagu wareystey isagoo jooga xabsiga Säter.
Dowladda ayaa hadda go’aan ku gaartay in loo saaro guddi soo baara oo ka soo baaraandega sidii dacwooyinkaan Bergwall/Quick loo soo maareeyey.
Taariikhda Sture Bergwall